Ciidamada FBI-da Mareykanka oo baaraya haddii laptop-kii laga xaday xafiiska Gudoomiyaha Aqalka Wakiillada, Nancy Pelosi laga iibiyay sirdoonka Ruushka… | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Ciidamada FBI-da Mareykanka oo baaraya haddii laptop-kii laga xaday xafiiska Gudoomiyaha Aqalka...
Ciidamada FBI-da Mareykanka oo baaraya haddii laptop-kii laga xaday xafiiska Gudoomiyaha Aqalka Wakiillada, Nancy Pelosi laga iibiyay sirdoonka Ruushka…
Ciidamada FBI-da Mareykanka ayaa baaraya haddii laptop-kii laga xaday xafiiska Gudoomiyaha Aqalka Wakiillada, Nancy Pelosi laga iibiyay sirdoonka Ruushka. Haweeney 22 jir ah ayaa kumbiyuutar ka qaadatay dhismaha Capitol.
Eedeynta ka dhanka ah Riley June Williams, waxaa maxkamadda u gudbiyay sarkaal ka tirsan FBI-da.
Waxaa la sheegay in Ms Williams lagu arkay telefishinka iyadoo hageysa dadkii weeraray dhismaha Capitol, 6-dii January.
Sarkaalka FBI ayaa sheegay in Ms Williams ay u muuqato inay tahay qof baxsad ah.
Williams waxay ka mid tahay in ka badan 200 oo qof oo kiisaskooda la furay, tan iyo wixii ka dambeeyay markii taageerayaasha Madaxweyne Trump ay xoog ku galeen dhismaha Capitol Hill, xilligaas oo Kongareeska uu kulan ka yeelanayay xaqiijinta in Joe Biden uu ku guuleystay doorashada.
Ammaanka ayaa aad loo adkeeyay hadda, iyadoo maalinta berri ah ay dhici doonto caleema saarka Joe Biden, waxaana laga cabsi qabaa in weerarro dheeraad ah ay geystaan kooxaha midig-fog iyo kuwo kale oo rumeysan sheegashada Madaxweyne Trump ee ah in doorashada lagu shubtay.
Sarkaalka FBI-da ee maxkamadda ka dhaartay ayaa sheegay in arrintaas uu usoo sheegay nin uu xiriir hore kala dhaxeeyay Ms Williams oo la sheegay in ay dooneysay in laptop ay ka xadday xafiiska Ms Pelosi, oo ah Afhayeenka Dimuqraaddiyiinta ee Aqalka Wakiillada u gudbiso qof jooga Ruushka.
Waxaa la sheegay in Williams ay dooneysay in kumbiyuutarka ay u dhiibto qof ay saaxiibbo yihiin oo ku sugan Ruushka, kaas oo kaddib qorsheyn lahaa inuu qalabka ka iibiyo SVR, oo ah Waaxda Sirdoonka Arrimaha Dibadda Ruushka.
Arrintan waxaa hadda ku socda baaritaan.
Madaxa shaqaalaa xafiiska Pelosi, Drew Hammill, ayaa labo maalmood kahor Twitter-ka ku soo qoray in weerarka ka dib, laptop laga xaday xafiiska afhayeenka, balse kumbiyuutarkaas keliya loo adeegsan jiray khudbad soo jeedinta.
Sarkaalkan ayaa sheegay in intii uu socday muuqaalka laga duubay weerarka laga sii daayay ITV News, in laga arki karay lagana maqli karay, haweeney lagu magacaabay Ms Williams oo koox dad ah ku hageysa jaranjarada aadda xafiiska Ms Pelosi.
Warbixin kale oo isla telefishinkaas laga sii daayay waxaa wareysi lagula yeeshay hooyada Ms Williams oo ku sugan deegaanka Harrisburg, Pennsylvania, taas oo xaqiijisay in gabadheeda ay tahay haweeneyda laga arkay muuqaalka teelfishinka. Waxay sheegtay in gabadheeda ay guriga ka baxday iyadoo aan la socodsiin halka ay aadeyso.
Sarkaalka FBI-da ayaa sheegay inay jiraan sababo loo rumeysan karo oo ah in Ms Williams ay gashay dembi iyadoo u dhacday dhismooyin ay ogtahay in ay xaddidan tahay gelitaankooda, kuna lug yeelatay falal lagu carqaladeynayo howlaha dowladda.
Previous articleTrump oo saacadaha ugu dambeeya ee madaxtinimadiisa cafis u fidiyay dad badan
Next articleMadaxweyne Cali Guudlaawe oo hoyga uu ka degan yahay Muqdisho kula kulmay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed.
Tobaneeyo muhaajiriin African ah ayaa laga cabsi qabaa inay dhinteen Arbacadii kadib markii ay tahriibiyeyaal ay ku tuureen badda Jabuuti, xilli ay kusii jeedeen...